SAWIRRO: Uhuru Kenyatta oo si kulul u weeraray Garsooreyaasha maxkamadda sare, kuna tilmaamay. – Xeernews24
SAWIRRO: Uhuru Kenyatta oo si kulul u weeraray Garsooreyaasha maxkamadda sare, kuna tilmaamay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee doorashadiisa la diiday ayaa weerar afka ah ku qaaday garsooreyaasha Maxkamada sare ee dalkaasi oo natiijada doorashadii uu ku guuleestay waxbo kama jiraan kasoo qaaday.
Uhuru Kenyatta oo taageerayaashiisa kula hadlay suuqa Burma ee magaalada Nairobi ayaa burcad ku tilmaamay guddomiyaha maxkmadda sare dalka Kenya, David Maraga iyo garsooreyaasha maxkamada ee soo celiyay dooarshada.
Madaxweyne kuxigeenka dalka Kenya Willima Ruto ayaa isna sheegay in afar qof oo uu ula jeedo garsooreyaashii xukmiyay go’aanka aysan bedeli karin go’aanka maalyiin shacab ah, waxa uusa tilmaamay in diyaar u yihiin doorasho kale .
Madaxwenaha Kenya ayaa horey u sheegay in uu kasoo horjeedo go’aanka ee Maxkamada sare ku baabi’isay guusha uu gaaray, balse uu ixtiraamayo una hogaasami doono go’aanka kasoo baxay Maxkamada sare.
Guddoomiyaha maxkamadda ugu sarre Kenya ayaa waxbo kama jiraan kasoo qaaday Guushii Dooarshada ee Uhuru , waxa uuna sheegay in ay ogaadeen in wax isdabomarinno ay hareyeen doorashada, isagoona amray in 60 maalmood gudahood lagu qabto doorasho xalaal ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/Uhuro.png 385 641 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-02 11:02:052017-09-02 11:02:05SAWIRRO: Uhuru Kenyatta oo si kulul u weeraray Garsooreyaasha maxkamadda sare, kuna tilmaamay.
Saylaci oo faray badhisaab ku xigeenka in uu deg deg uga guuro aqalka uu deganyahay... Nin Bartiisa Twitterka laga Xanibay ka dib marku Ku Qudha ka Jaray Kaniico ...